Carl Henry Corporate Blog
Shirkadaha Shirkadda 9 Xudduudaha Xoghaynta Baanka iyo Bankiga ee Dalalka 17
Waxaanu bixinay adeegyo badan oo ka mid ah dhismaha shirkad iyo adeegyo maareyn ah oo ku saabsan in ka badan 30 Years, oo ay ku jiraan caalamkeena Agaasime Agaasime iyo adeegga saamileyda, Agaasimaha Nominee waa 100% off-shore iyo ganacsigiisii ​​midigtiisa - taas macnaheedu waa in dhammaan shirkadaha shirkadu ay si sharci ah u qabtaan qof ganacsade ah oo ka baxsan xuduudda dhaqaale ee hadda.
Waxaannu soo qaadnay 9 khaas ah oo khaas ah oo aannu doorbidno inaan ku shaqeyno, helno si aad u soo jiidasho leh oo bixisa amniga ugu badan.
Agaasimkayaga iyo Hantidhowrka Magacaabistu waxa uu ka jiraa dhexdhexaadinta, waxaanu saxiixaynaa Heshiiska Adeegga Nominate ee u dhaxeeya Macaamilka iyo Magaca. Tani waxaa ka mid ah Baaqa Aaminaada ee nidaamiya sida qaabka shirkadu u socoto, mas'uuliyadaha loo magacaabay iyo heerka warbixinta ee Macaamilka faa'iidada leh.
Adeeggu wuxuu siinayaa shirkada faa'iidada leh ee ugu sarreysa iyo qarsoodiga madaama magaca qofka loo magacaabay uu ka muuqan doono dukumiintiyada shirkadaha, heshiis kasta oo ganacsi, hawlgalada xisaabaadka bangiga iyo diiwaanka ganacsiga ee maamulka. Tani waxay sidoo kale cadeyneysaa in "maareynta iyo kantaroolka" ee shirkadda ay si adag uga baxsan tahay canshuur kasta oo sare.
Baaxadda shaqada ee ay qaadeen wakiilka iyo hawlaha shirkadda waxay ku kala duwanaan doonaan kiiskaba, sidaas darteed khidmadaha adeeggan waa la wada xaajoodaa isla markaana waafaqsan yihiin dhinacyada ku saleysan shakhsi ahaan.
xiriirka Cinwaanka email Tan waxaa lagu dying from corruption. Waxaad u baahan tahay Add to view. si aad ugala hadasho baahiyahaaga.